Iqiniso lokuthi uCondoleezza Rice (isithombe) - 66 kumthethosivivinywa futhi owokuqala ngobulili nombala wesikhumba weNobhala Wombuso wase-US, bayazi konke. I-biography yakhe nerekhodi yethrekhi ingatholakala ezinhlobonhlobo eziningi ze-inthanethi. Kuyathakazelisa kakhulu ukulandelela izigaba zendlela yayo, ngoba akuwona wonke umuntu waseMelika omnyama, ngisho nendoda, okwazi ukuphatha isikhundla esinjalo. Mhlawumbe, ngokulandela inqubo yokwakheka kwayo, kuyokwenzeka ukuthi kuhlolwe ngokunembile lokhu ngobuntu bayo obuhlukile.
"Ngizoba lapha ..."
Ngenkathi uCondoleez encane eneminyaka eyisishiyagalombili kuphela ubudala, ubaba, uthisha kwenye yeyunivesithi yase-US, wahola le ntombazane ekuvakasheni eNtabeni eNkulu. Ngokungafani nezinye izingane, akazange abheke isimo, kodwa wayecabanga ngento ethile. Khona-ke, ebheke emehlweni kayise, wathi: "... Ngizobe ngilapha." Ngisho noma kunjalo, kusukela esemncane, intombazane ibeka umgomo: ukuthatha indawo e-White House. Akazange abe namahloni ngombala wesikhumba sakhe, noma ngokungabikho kobudlelwane bezombusazwe nabazali bakhe. I-Condoleezza Ilayisi yafinyelela umgomo wayo: ngemuva kokuphothula eDenver University, esikhundleni sezithuba eziningi zokuphatha, ngemuva kokusebenza njengomqondisi weMkhandlu wezokuPhepha e-USSR, lo wesifazane waba ngowesifazane wokuqala ongenaye umhlophe ukuba abe uNobhala Wezwe.
I-Condolism neNtando yeningi
Emdongeni weKhabhinethi kaNobhala Wombuso, kukhona inkulumo kaJames Marshall, lapho ephakamisa khona uhlelo lokuvuselela kabusha kweYurophu emva kokulwa. I-Condoleezza Rice iyazibheka njengomphathi wayo. Ithi ngokuqiniseka ukuthi i-United States yiyona yodwa izwe emhlabeni eliletha intando yeningi nokuchuma kubantu baseMpumalanga. Ukholelwa ngobuqotho ukuthi yi-US kuphela, okuphazamiseka kwayo ezindabeni zangaphakathi zamazwe amaningi, ngezikhali zayo, angaletha ukuthula kubantu baseMpumalanga. UCondoleeza Rice uthi endaweni lapho akhule khona, igama elithi "intando yeningi" alikho. Kodwa-ke, izwe likwazi ukulikha, naphezu kwezithiyo nemibono yabantu abaphikisanayo. Mhlawumbe igama elithi "intando yeningi" liqondwa yi-lady-66 ngendlela yalo, kodwa alushiyi umbono walo kwi-iota. Abasebenzi, ukubekezela nokunamathela ngokuqinile ezimisweni zabo baziswa abaholi bamazwe amaningi. UNobhala Wombuso uzinikele ngempela eqenjini asebenzisana nalo. Uma eqhathanisa ukukhuthazela kwakhe, ukuzethemba nokusebenza kahle ngezinkolelo zakhe, enye yalezi zindawo zathi isibalo sezombangazwe seCondoleezza Rice sisebenza ngendlela ephumelelayo njengoStalin's People's Commissars phakathi nempi.
"... akukho lutho lokukhuluma ngoPutin"
E-Russia, i-Condoleezza ingaphezu kokugxeka. Okokuqala, ngoba umbono wakhe ngentando yeningi awuhambisani nokuqonda leli gama nguPotin noMedvedev. Okwesibili, ngoba ngiyaqiniseka ukuthi ukulayishwa kabusha kobuhlobo kwenzeka kuphela kwi-United States, futhi iRussia ngeke ikwenze noma kunjalo. I-Condoleezza Ilayisi eRussia isilokhu ikhulume, ukuyibeka ngomoya omnene, ngokungafanele. UNobhala Wombuso 66 akasithandi ukuthi iRussia isisekele isinqumo se-UN ngokuphathelene ne-Iran, igxeke kakhulu inqubomgomo yezwe eSiriya, futhi i-E.Snoudenu ibizwa obala ngokuthi "ukushaywa ebusweni" e-United States. "IRussia," kusho uCondoleezza Rice, "yiwona amandla alahlekelwe amandla ayo, yingakho u-Obama engenakho okumele akhulume nomengameli waseRussia." Abanye osombangazwe bayaqiniseka ukuthi isikhathi asikude lapho owesifazane omnyama enezimpendulo zakhe kanye nomthamo omkhulu wokusebenza kuyoba ngumongameli waseMelika .
Goryacheva Svetlana Petrovna: umndeni, oxhumana nabo, isithombe, biography
Ukubukwa kwesokunxele nokulungile kwezombusazwe. Yiziphi imibono yezombangazwe?
Uyini umjovo we-SQL?